Visual Sexual Stimuli နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Arch လိင်ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2009 စက်တင်ဘာ 8 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2008 ဧပြီ; 37 (2): 206-218 ။
2007 သြဂုတ် 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1007/s10508-007-9217-9
ဟဲလ်အေ Rupp, Ph.D ဘွဲ့ကို1,2 နှင့် Kim ကဝေါ်လဲန်, Ph.D ဘွဲ့ကို3
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Arch လိင်ပြုမူနေ
ဤဆောင်းပါးသည်လက်ရှိတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်တုံ့ပြန်ဘယ်လိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုသုံးသပ်ပြီး။ ယောက်ျားအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုကိုတုံ့ပြန်သောယူဆချက်ယေဘုယျမျက်မြင်လက်တွေ့ပံ့ပိုးနေစဉ်, လိင်ကွဲပြားမှု၏ယခင်အစီရင်ခံစာများတင်ပြလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်းနည်းစနစ်များ၏ variable ကိုအကြောင်းအရာအားဖြင့်ရှက်ကြောက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဇာတ်စင်လိင်ကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်ရသောပထမအဆင့်ကြောင်းတင်ပြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားမတူကွဲပြား, ဒီအခြိနျမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အဆိုပြုထားအာရုံကြော activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ထင်ဟပ်နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းရံဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများတွင်ယခင်ကအစီရင်ခံလိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ထို့အပြင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအချက်များဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အချက်များပါဝင်သူထိုကဲ့သို့သောဟော်မုန်းပြည်နယ်နှင့်လူမှုရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအဖြစ် variable တွေကို, အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်တင်ဆက်အကြောင်းအရာမှတိကျတဲ့ variable တွေကိုပါဝင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့အကြောင်းအရာဝိသေသလက္ခဏာများ differential အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါကောက်ချက်ချ။ အထူးယောက်ျားကပိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတင်ပြဆက်စပ်နှင့်အတူကွဲပြားစေခြင်းငှါနေစဉ်လှုံ့ဆော်မှုတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်သည့်သရုပ်ဆောင်များကို၏လိင်ကလွှမ်းမိုးပေါ်လာပါသည်။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု, ရိပ်မိကျားမအခန်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေဖြစ်နိုင်သမျှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုသိမြင်လိင်ကွဲပြားမှု၏ယေဘုယျနားလည်မှုအဘို့လည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားအလားတူနှစ်သက်ဖွယ်စမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးပါနှင့်ရည်ရွယ်သည်ဟုလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနမှလက်တွေ့ကျတဲ့အရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြသည်။
keywords: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, လိင်ကွဲပြားမှု, လိင်စိတ်နိုးထ
ညံ့ဖျင်းမှတ်တမ်းတင်ပေမယ့်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုကျယ်ပြန့်, အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မီဒီယာတစ်ဦးကဘုံယူဆယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတုံ့ပြန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အမြိုးသမီးမြားဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားအလားတူထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲရှိနေစဉ်ယောက်ျားမှာညွှန်ကြားထားညစ်ညမ်းမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ (သာ 40% အမျိုးသမီးနေစဉ်နှစ်စဉ်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ 72 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီး, 28% အထီးဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းwww.toptenREVIEWS.com, 2006) ။ စမ်းသပ်လေ့လာမှုများယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုကိုတုံ့ပြန်သောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ပေမဲ့လည်း, ဒီလိင်ခြားနားချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံနားလည်မှု (မရှိKinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953; Laan, Everaerd, ဗန်ဘဲလ်နှင့် Hanewald, 1994; ငွေ & Ehrhardt, 1972; Murnen & Stockton, 1997; Schmidt က, 1975; Steinman, Wincze, Sakheim, Barlow, & Mavissakalian, 1981) ။ လိင်ကွဲပြားမှုတို့ကိုထုတ်လုပ်အတိအကျယန္တရားများ၏အတိုင်းအတာမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဤလိင်ခြားနားချက်မှပံ့ပိုးနိုင်သမျှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတုံ့ပြန်မှုလူ့လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အပြည့်အဝလိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြောင့်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ယုံကြည်သည့်မျိုးစုံဖြစ်စဉ်များဖော်ပြသည့်သီအိုရီ Construction တင်ဆက်ဖို့ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပေသည်။ ကျနော်တို့အရေးပေါ်အတွက်ပေါင်းစပ်သိမြင်မှု၏ထုတ်ကုန်များနှင့်တစ်ဦးချင်း၏အရံဇီဝကမ္မပြည်နယ်များ (အဖြစ်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ, ဒါမှမဟုတ်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုန့်ပြန်မှတ်Basson, 2002; Heiman, 1980; Janssen, Everaerd, Spiering, & Janssen, 2000; နန်းတော် & Gorzalka, 1992) ။ လိင်စိတ်နိုးထဖို့သိမြင်ပံ့ပိုးမှုများကိုလုံးဝလူသိများပေမယ့်အကဲဖြတ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု၏အမျိုးအစားနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု (ပါဝင်ကြသည်မဟုတ်Basson, 2002; Janssen et al ။ , 2000; Redoute et al ။ , 2000; Stoleru et al ။ , 1999) ။ လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်း (အမျိုးသမီးတွေအတွက်နှလုံးသွေးကြော function ကိုပြောင်းလဲ, အသက်ရှူနှင့်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်, အမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူနှင့် vasocongestion ပါဝင်သည်Basson, 2002; Janssen et al ။ , 2000; Korff & Geer, 1983; Laan, Everaerd, ဗန် der Velde, & Geer, 1995) ။ ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရှုမြင်လာတဲ့အခါ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား, အသက်ရှူ, စိုက်ထူခြင်း, အင်္ဂါဇာတ် vasocongestion အဖြစ်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု, မကြာခဏလိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-အစီရင်ခံပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်နှင့်အတူစိတ်တိုးပွားနေကြသည်, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီး (Chivers, Reiger, Latty, & Bailey, 2004; Laan et al ။ , 1994; Wincze, Hoon, & Hoon, 1977) ။ ဇီဝကမ္မအစီအမံများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏အစီရင်ခံစာများအကြားမကိုက်ညီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုမှသာဖြစ်ရပ်များမဟုတ်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူကယောက်ျားပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုများနှင့် arousal ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်အကြားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော, ပေမယ့်မရပြည့်စုံ, မာတိကာ (ပြပါအတိုင်းဤစိတ်တိုးပွား, မိန်းမတို့အားအဓိကအားန့်အသတ်ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါသည်Chivers et al ။ 2004; ခန်းမ, Binik, & Di Tomasso, 1985) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့သေးမျိုးစုံသိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းများကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သည့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်နိုးထကြားအတိအကျဆက်ဆံရေးမျိုးမသိရပါဘူး။ သူတို့ဖွယ်ရှိအပြန်အလှန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိခိုက်စေပေမယ့်ဒါဟာ (ဤသိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းများကွဲပြားယန္တရားများနှင့် circuitry မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်Janssen et al ။ , 2000).
ကျွန်ုပ်တို့၏သီအိုရီ orientation ကိုမှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့အပါအဝင်ဦးနှောက်ထဲမှာသတိနဲ့သတိလစ်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့, အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နောက်ဆက်တွဲရံဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားတဲ့အတှကျပြည်တွင်းရေးအခြေအနေတွင်သတ်မှတ်ထားသော။ supposes အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ထားတဲ့အတွက်သိမြင်မှုမူဘောင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှရူးနှမ်းတိကျသောတုံ့ပြန်မှု mediates ။ တစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထရလဒ်များကိုရံဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုများ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အခြေအနေများသတ်မှတ်ထားသည့်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်, ယခင်အတွေ့အကြုံ, နှင့်လက်ရှိလူမှုရေးအခြေအနေတွင်အဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအချက်များ, အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်မှ, သိမြင်တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်ဖို့ပြီးတော့အရာတုံ့ပြန်ချက် ယင်းလှုံ့ဆော်မှုရန်, အလှည့်အတွက်ဇီဝကမ္မ arousal ၏အတိုင်းအတာကိုအကျိုးသက်ရောက်သောလိင်စိတ်နိုးထ၏ခံစားချက်များကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သိမြင်မှု-ဇီဝကမ္မကွင်းဆက်ဖြတ်သန်းနှင့်အတူ arousal တိုးပွားလာအများအပြားကြားမှာဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ကနဦးသိမြင်မှုယန္တယားသတိသို့မဟုတ်သတိလစ်ရှိမရှိအချို့စုံစမ်းစစ်ဆေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal တစ်မူလတန်းပစ်မှတ် (ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှကနဦးဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအလေးပေးအတူမဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ပါသည်Basson, 2002; Laan et al ။ , 1995) ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထသြဇာလွှမ်းမိုးပေမယ့်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာလက်ရှိသိမြင်ပြည်နယ်အတွင်းဇီဝကမ္မလိင်စိတ်နိုးထ၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထဆုံးဖြတ်ရန်အတိအကျဘယ်လောက်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာလိင်ခြားနားချက်ဖွယ်ရှိရှိပါသည်။
လိင်စိတ်နိုးထ၏ယခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထိုကဲ့သို့သောစိုက်ထူသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါ vasocongestion အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မအဆုံးရမှတ်ပေါ်တွင်အဓိကအားအာရုံစူးစိုက်ကြ, ခဲ quantitative အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအကဲဖြတ်အပါအဝင်လိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့, ဆန်းစစ်ပါပွီ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်နေသညျလူသားတို့အတွက်လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှု၏အရေးပါသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုခြုံငုံလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်သြဇာသက်ရောက်လျက်, သိမြင်ပြည်နယ်၏အရေးပါမှုအချက်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခံရဖို့များပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပြည့်အဝအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မနှင့်သိမြင်မှုရှုထောင့်နှစ်ဦးစလုံးဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အရံနှစ်ဦးစလုံးဇီဝကမ္မတိုင်းတာတိုင်းတာအဖြစ်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အာရုံကြော activation တိုင်းတာခြင်းလေ့လာမှုများလေ့လာမှုများအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, တုန့်ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. ယခင်တွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏စာမေးပွဲပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထထုတ်လုပ်ရန်သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များအကြားရှုပ်ထွေးအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုရှေ့ဆက်စေနိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဘာသာရပ် Ratings အဖွဲ့ထဲမှာလိင်ကွာခြားချက်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်လိင်ကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အကျိုးစီးပွားပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings ကိုအသုံးပြုပါ။ တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြတဲ့အခါ, ယောက်ျားမိန်းမတို့မကြာခဏလှုံ့ဆော်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုသဘော arousal ၏အဆင့်ဆင့်, အဖြစ်သရုပ်ဆောင်များကို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ ratings သတင်းပို့ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆွဲဆောင်မှု၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှုန်းကိုအဆင့်ဆင့်သို့သော်စနစ်တကျလိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါ၎င်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာကြပြီမဟုတ်ရှိရာအများစုမှာလေ့လာမှုများ (Bancroft, 1978).
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး differential ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်တုန့်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကို attribute တွေတစ်အကွာအဝေးကိုရှာဖွေကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျရှုထောင့်ကိုဖော်ပြရန်သောအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ။ ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမတို့လှုံ့ဆော်မှုကိုဖန်တီးရှိမရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဘာသာရပ်များ '' တုံ့ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးတဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်လူကိုဖန်ဆင်းခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ထဲကနေကလစ်များကြည့်ရှုအားပေးသောမိန်းမတို့ကို (ထိုမိန်းမသည်လုပ်ရုပ်ရှင်ကားမှလိင်စိတ်နိုးထ၏အဆင့်မြင့်အစီရင်ခံတင်ပြLaan et al ။ , 1994) ။ သူတို့ woman- နှင့်လူလုပ်ဇာတ်ကားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ပြသအဖြစ်သို့သော်မိမိတို့၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုတွင်ထင်ဟပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါကစိတ်တိုးပွားဤအမျိုးသမီးများမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်-created ထိုမိနျးမဖန်တီးရုပ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုမနှစ်သက်, အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲခြင်းအဖြစ်ကိုပိုပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု, အစီရင်ခံကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုလူကိုဖန်ဆင်းရုပ်ရှင်အဘယ်သူမျှမ foreplay ပါဝင်ပတ်သက်နှင့်မိန်းမကိုဖန်တီးရုပ်ရှင် foreplay မှမြှုပ်နှံ 11-မိနစ်လေးရှိခဲ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်နီးပါးသီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါဟာလိင်ဆက်ဆံမှုထက်အထီး-နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်တီးရုပ်ရှင်မှအမြိုးသမီးကတုန့်ပြန်, ဒါမှမဟုတ် foreplay ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနဲ့ သာ. ကွီးမွတျနှစျသိမျ့ထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သာဆင်တူအကြောင်းအရာဇာတ်ကားတွေကို အသုံးပြု. ဖြေရှင်းပေမယ့်ယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal အကြားလေ့လာတွေ့ရှိဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာတစ်ခုတားစီးသို့မဟုတ်စီစစ်ဖြတ်တောက်အတွက်ရရှိလာတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောလိင်၏ပုံဖော်ခြင်း၏လူမှုရေးလက်ခံကဲ့သို့သောအခြားသိမြင်မှုယန္တယား, မြွက်မှအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များဖြစ်စေတဲ့ဆိုးကျိုးစိတ်ခံစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုထွက်ခွာ ထိခိုက်။ ဤသည်ကွာဟမှုလည်းမိန်းမအပြုသဘောနှင့်အတူပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏မြင့်မားသတင်းပို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ထိခိုက်စေပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြပွဲ (အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူလိင်အင်္ဂါ arousal တိုးလာPeterson & Janssen, စာနယ်ဇင်းအတွက်) ။ အဆိုပါပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာဒါမှမဟုတ်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်လိင်စိတ်နိုးထ၏ "စစ်မှန်သော" အတိုင်းအတာရှိမရှိမဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဆက်စပ်လေ့လာမှုမှာ Janssen, လက်သမားနှင့်ဂရေဟမ် (2003)အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသုတေသနပြုန်ထမ်းဖြစ်စေကရွေးချယ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ပြသခဲ့ကြသည်သောအခါ, သူတို့ကသင်တန်းသားများကို '' ကိုယ်ပိုင်လိင်အဖွဲ့ဝင်များကရွေးချယ်ရုပ်ရှင်မှပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏အဆင့်မြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားများအတွက်ဗီဒီယိုအားလုံးအတှကျအမြိုးသမီးမြားနှိုင်းယှဉ်ပိုမိုမြင့်မား ratings ခဲ့ပေမယ့်အထီး-ရွေးကောက်တော်မူရုပ်ရှင်အဘို့မိမိတို့အမြင့်ဆုံး ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားကိုပြု၏ယောက်ျားထက်ဇာတ်ကားအားလုံးဖြတ်ပြီးလိင်စိတ်နိုးထ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်အထီး-ရွေးချယ်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ထက်အမျိုးသမီးမှ arousal ၏အဆင့်မြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကကွာခြားချက်နှိုင်းယှဉ်ငယ်နှင့်လူတို့၏နေဆဲပင်အမျိုးသမီးတွေကို-ရွေးချယ်ထားသည့်ဇာတ်ကားအဘို့မိန်းမတို့သည်ထက်မြင့်မား ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတူတူအဲဒီဒေတာယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုပြီးတုန့်ပြန်, နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအထီးကရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်မယ်ဆိုရင်ဒီလိင်ကွဲပြားမှုကိုခိုင်ခံ့စေခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာယောက်ျား ပို. ပင်ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်ရာတွင်အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များ၏လိင်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ထင်ရှားကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေယောက်ျားလုပ်ခဲ့တယ်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျော့နည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟူသောအကြံပြုထားသည်။
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုသည်ဤရုပ်ရှင်မှသင်တန်းသားများကို '' တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်ကြောင်းအထီး-ရွေးချယ်ထားသည့်ဇာတ်ကားအချို့ကိုရှုထောင့်ရှိကွောငျးအကြံပြုနေစဉ်, လေ့လာမှုယောက်ျားကရွေးချယ်ဇာတ်ကားတွေကိုအမျိုးသမီးများကရွေးချယ်ထားသည့်ဇာတ်ကားအနေဖြင့်ကွဲပြားပုံကိုအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ဤအဇာတ်ကားတွေ foreplay, ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အချိန်ပမာဏကိုများအတွက်စံခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်းယောက်ျားမိန်းမတို့နေဆဲဇာတ်ကားကိုရွေးချယ်ခြင်းလိင်နှင့်အတူကွဲပြားရာတစ်ခုခု, သူတို့ကိုနှိုးဆွသောကပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ သဘောတူညီခဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးဖို့အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မိမိတို့၏အစီရင်ခံ arousal ဆက်နွယ်နေကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတို့, သို့သော်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အခြေအနေမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်ကူးယဉ်အပြင်ရုပ်ရှင်၎င်းတို့၏ arousal အတွက်အရေးကြီးသောအမြိုးသမီးကိုစောငျ့ရှောကျဖို့စွမ်းရည်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် (နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်မြင်ကွင်းသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပရောဂျက်ပေမယ့်, လူတို့သညျလှုံ့ဆော်မှုအတွင်းသရုပ်ဆောင်တွေ objectify ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုငွေ & Ehrhardt, 1972) ။ ဒါကြောင့် (အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသည့်အခါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများရှိသည်ပေါ်လာသောSymons, 1979); သို့သော်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဦးစားပေးမဟာဗျူဟာကိုအသုံးချရန်မှဘာသာရပ်များများ၏စွမ်းရည်ကိုကနေ detract စေခြင်းငှါ၎င်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသောလက္ခဏာများမသိသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားဖို့တက်ရောက်ရန်စေခြင်းငှါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ nonsexual အသေးစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကွဲလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကွဲပြားခြားနားသောအကြည့်ပုံစံများသရုပ်ပြမကြာသေးခင်ကမျက်စိခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှု (ကထောက်ခံနေသည်Rupp & Wallen, 2007) ။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလိင်အင်္ဂါ, အမျိုးသမီးမျက်နှာများနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်အမျိုးသမီးအလောင်းမှာရှာဖွေနေ၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုအချိန်အများစုကုန်ဆုံးသော်လည်း, ဟော်မုန်း contraceptives သုံးပြီးအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ဓါတ်ပုံများနှင့်အဝတ်အစား၏နောက်ခံမှာပိုပြီးမကြာခဏကြည့်ရှုကြ၏။ အဲဒီလေ့လာမှုကလည်းယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်ပုံထဲမှာအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များကို '' မျက်နှာများမှာပိုပြီးမကြာခဏကြည့်ရှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသူတို့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Contextual features တွေဆီသို့ဦးတည်ပုံ, အမျိုးသမီးရဲ့ဘက်လိုက်မှုတွေ့ရှိရပုံကိုလိင်ဆွဲဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ ratings, အထူးအဝတ်အစားများနှင့်နောက်ခံကွဲပြားဘူးသောကြောင့်, နည်းအပြုသဘောအကဲဖြတ်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပေါ်လာဘူး ဓါတ်ပုံများ။ ဤသည် (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတန်းတူသူတို့ရဲ့အကြည့်ပုံစံများအတွက်ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းနှိုးဆွသောအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ rated ရသောအခြားမကြာသေးမီမျက်စိ-ခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Lykins et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ Rupp နှင့်ဝေါ်လဲန်လေ့လာမှုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုမရှိသော, သို့သော်ဒီမျက်စိခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆက်စပ် element တွေကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့လိင်ခြားနားချက်ကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ သို့သော် Lykins et al ။ အဆိုပါ previouis လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက် Contextual အာရုံစိုက်မှုအတွက်လိင်ခြားနားချက်အမျိုးသမီးတားဆေးအသုံးပြုခြင်းကိုအပေါ်မှီခိုခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်လေ့လာမှုကိုစမ်းသပ်မိန်းမများပါးစပ် contraceptives သုံးပြီးခဲ့ကြသည်ဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားမရခဲ့ပေ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ယောက်ျားမိန်းမတို့အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားအကောင်းဆုံးအဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်စေခြင်းငှါခြားနားသောသိမြင်ဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အနာဂတ်မျက်စိခြေရာခံခြင်းအလုပ်လိင်စိတ်နိုးထ၏တစ်ပြိုင်နက်တိုင်းတာခြင်းကိုအသုံးပြုသည်အထိသို့သော်ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်လိင်စိတ်နိုးထမြှင့်တင်ရန်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအဘယ်အရာကို element တွေကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လေ့ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားယောက်ျားမိန်းမတို့ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများ အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားပေးထားပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏လိင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆလိုက်ရန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုပုံမှန်အားဖြင့် (ယောက်ျားအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှစ်ခုစလုံးဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လေ့ထုတ်လုပ်Koukounas & ကျော်, 2001; O'Donohue & Geer, 1985), ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များကို။ arousal နှစ်ခုစလုံးလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတိုင်းအတာအားဖြင့်ညွှန်ပြထပ်တလဲလဲတူညီသောဆလိုက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအမြိုးသမီးမြား habituate မပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်, Post-စမ်းသပ်မှုအင်တာဗျူး (စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အမြိုးသမီးကအသုံးပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့မဟာဗျူဟာရှာဖွေတွေ့ရှိLaan & Everaerd, 1995) ။ အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ၏ရှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းစမ်းသပ်မှုတွေထပ်ခါတလဲလဲအဖြစ်သူတို့အခြေအနေတွင်-related နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင်များကို၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်တွေကိုအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု၏ nonsexual အသေးစိတ်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကို paid ကပြောသည်။ ဒါဟာယောက်ျားလုပ်ပေးထက်ယေဘုယျအားဖြင့်, အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ Contextual နှင့် nonsexual အသေးစိတ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ, တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားပြုစီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင်ဖို့ပိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ခေါ်ဆောင်သွားတုံ့ပြန်မှုအစီရင်ခံဆိုတဲ့အချက်ကိုကထောက်ခံအဖြစ်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဆက်စပ်ဒြပ်စင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ပင်, အမျိုးသမီးများအတွက်ကြီးထွား arousal မှဦးဆောင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ (Kinsey et al ။ , 1953).
နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ထပ်ခါတလဲလဲတင်ဆက်မှုမှ habituated သောလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal အတွက်လိင်ခြားနားချက် (လေ့အပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုန့်ပြန်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏ content အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကယ်လီ & Musialowski, 1986) ။ ဤလေ့လာမှု၌, ယောက်ျားမိန်းမတို့လေးရက်ဆက်တိုက်ကျော်အတူတူခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနှစ်ခုစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့ arousal ၏ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံများလေ့ပြသခဲ့သည်။ ပဉ်စမနေ့တွင်, ဘာသာရပ်များဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်မူရင်းဇာတ်ကားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အပြုအမူအတွက်စေ့စပ်အသစ်သောသရုပ်ဆောင်များကိုတစ်ရုပ်ရှင်အတွက်စေ့စပ်အတူတူသရုပ်ဆောင်များကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများအတွက်သာအသစ်သောသရုပ်ဆောင်များကိုယခင်ကမြင်ကြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်ရှိရာရုပ်ရှင်များအတွက်ပထမဦးဆုံးပေါ်ကြောင်းညီမျှပဉ်စမနေ့၌ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏အဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန်, အမျိုးသမီးရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal မူရင်းသရုပ်ဆောင်များကိုအသစ်သောအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ထားတဲ့အတွက်ဇာတ်ကားကြည့်ရှုတဲ့အခါမှသာပထမဦးဆုံးနေ့ကအဆင့်ဆင့်သို့ပြန်သွား၏။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအမျိုးသမီးတွေတစ်တသမတ်တည်းမိတ်ဖက်များ၏တည်ငြိမ်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးအကြံပြုလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကောင်းကိုတုံ့ပြန်သော်လည်းယောက်ျား, လူသစ်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဦးစားပေးပြသသောအကြံပြုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသာမန်အမျိုးသမီးများကိုဤအမြင်ကိုနည်းနည်းပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပိုနှစ်သက်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များအကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုချစ်ခင်၏အဆင့်ကိုသာအသီးသီးတစ်ဦးလိင်ကွဲစုံတွဲများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနှစ်ခုပုံပြင်များထဲကတစ်ခုဖတ်ဖို့ဟုမေးသောအခါဥပမာ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးချစ်ခင်နှင့်အမျှမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအလားတူဇာတ်လမ်း rated ပိုပြီးလိင် (နှိုးဆွသောSchmidt, Sigusch, & Schafer, 1973) ။ အဆိုပါ ကယ်လီနှင့် Musialowski (1986) လေ့လာမှုလည်းမိန်းမယောက်ျားတို့သည်ရုပ်ရှင်သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပရောဂျက်များနှင့်အရှင်မိတ်ဖက်တည်ငြိမ်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြိုးဖြစ်နိုင်သည်ပြီးတော့ပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အခြေအနေများတို့သညျဤမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်အရာကိုအောက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပေမယ်သို့သော်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအခွအေနသို့ Project, သို့မဟုတ်စုပ်ယူမှုလည်း, အပြုသဘောလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့အမျိုးသားများအတွက်သရုပ်ပြနေသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသောအကြောင်းအရာအတွက် preference ကိုအတွက်လိင်ခြားနားချက်ထူထောင်နိယာမအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု same- သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်သရုပ်ဆောင်များကိုပုံဖော်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ကွဲယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အခြားအမျိုးသမီး၏ဓာတ်ပုံများကိုနှုန်းထက်နိမ့်လိင်တူချင်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုအဆင့်သတ်မှတ်မည်။ ဘွဲ့ကြိုယောက်ျားမိန်းမတို့ masturbating ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ဓါတ်ပုံများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်အခါ, ယောက်ျား (အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများ၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ဦးသိသိသာသာလျော့နည်းမျက်နှာသာတုံ့ပြန်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်Schmidt က, 1975) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အမျိုးသမီးအလားတူနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းဓါတ်ပုံများသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, ကော်စတာ, Braun နှင့် Birbaumer (2003) ယောက်ျားဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဝတ်လစ်စလစ်ပိုမိုမြင့်မား rated သော်လည်း, တူညီသောလိင်ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဝတ်လစ်စလစ်၏ဓါတ်ပုံများကိုမှအမျိုးသမီးပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏တန်းတူအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များတင်ပြခဲ့ကြသည်သည့်အခါအလားတူပုံစံများ (ဖြစ်စေလိင်ကွဲသို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြSteinman et al ။ , 1981) ။ အမျိုးသားများအတွက်သူတို့လိင်ကွဲသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူရုပ်ရှင်ပြုထက်လူနှစ်ယောက်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှ Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်နိုးထတစ်သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ကိုပြသသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, လိင်ကွဲသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးလိင်တူဆက်ဆံသူရုပ်ရှင်အကြားသတင်းပေးပို့လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးခြားနားချက်မပြခဲ့ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများ (အကျိုးစီးပွားသွယ်ဝိုက်အစီအမံအဖြစ်ဓါတ်ပုံများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်အာရုံကိုသုံးပြီးမကြာသေးခင်မျက်စိခြေရာခံခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာLykins, Meana, & Strauss, 2007; Rupp & Wallen, 2007) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံထဲမှာအထီးသရုပ်ဆောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအမျိုးသမီးမှာရှာဖွေနေအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။
ယခင်အလုပ်အမြိုးသမီးမြား (မကျင့်ပေမယ့်ယောက်ျား, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ပစ်မှတ်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့တိကျတဲ့ဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟုထိုကဲ့သို့သော, လိင်ကွဲယောက်ျားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်ဘက်လိုက်မှုကသူတို့ရဲ့လိင်သဘာအပေါ်သို့မှီခိုကြောင်းအကြံပြုChivers et al ။ , 2004) ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်လိင်ကွဲလိင်၏ရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါ, အထီးလိင်အင်္ဂါအတိုင်းအတာနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများယောက်ျားသူတို့မှဆွဲဆောင်ခဲ့ကြသောလိင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှအမြင့်မားဆုံးတုန့်ပြန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ကွဲယောက်ျား, လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားနှင့်အထီး-to-အမျိုးသမီးတယောက်ပါထည့်သွင်းမယ့်နမူနာကနေအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များအတွက်စစ်မှန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မိန်းမတို့အဘို့, ဆန့်ကျင်ရန်, လိင်အင်္ဂါလိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်သည့်သရုပ်ဆောင်များကို၏လိင်ခွဲခြားခြင်းမရှိပေ။ Chivers et al ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထအတွက်အမျိုးသားများတွင်ကွဲပြားခြားနားဖွဲ့စည်းကြောင်းအကြံပြုဤတွေ့ရှိချက်များအနက်အမျိုးသမီးတွေမဟုတ်စဉ်အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်အနက်ကိုရသောအမျိုးသမီးများသည်တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုကထောက်ခံပေမယ့်မဟုတ်လူတို့သညျဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမစဉ်, (, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦး (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို bonobos) nonhuman လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ရန်ပိုမိုမြင့်မားလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ပြသChivers & Bailey, 2005).
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့အထက်ဖော်ပြထားတဲ့စာပေအပေါ်အခြေခံပြီး, ကန့်သတ်လိင်ကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုကျလာသောသောအခင်းအကျင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (လူတို့သညျသရုပ်ဆောင်များကို၏ objectification ဖွင့်လှုံ့ဆော်မှုကြိုက်တတ်တဲ့စဉ်ဘာသာရပ်သည်သူတို့ကိုအခွအေနသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပရောဂျက်ခွင့်ပြုလှုံ့ဆော်မှုမှအပြုသဘောတုံ့ပြန်ပုံပေါ်ငွေ & Ehrhardt, 1972) ။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေနှစ်ဦးစလုံးမှ arousal ၏တန်းတူအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့စဉ် same- နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားခွဲခြားမှုဖို့အထီးသဘောထားကိုအထောက်အကူပြုပေမည်။ အမျိုးသမီးများသည်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် "ဖြစ်" ဖို့လှုံ့ဆော်မှုသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပရောဂျက်လျှင်အထူးသ, သူတို့ထို့နောက်လိင်တူချင်းသရုပ်ဆောင်များကို၏လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းမည်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားအသစ်အဆန်းကြိုက်တတ်တဲ့စဉ်ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်တည်ငြိမ်အခြေအနေများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု preference ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, (များစွာသောယောက်ျားမျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတစ် preference ကိုသရုပ်ပြရသောမျိုးစိတ်ဖြတ်ပြီးတူညီပေးထားSymons, 1979), တစျခုအသစ်အဆန်း preference ကို၌ဤလိင်ခြားနားချက်တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှုကိုထောက်ပံ့ hypothesize နိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ဤလိင်ကွဲပြားမှုသူမငယ်ရွယ်, လူမှုဗေဒဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်စောင့်ရှောက်မှုကကူညီမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရေရှည်အိမ်ထောင်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ထားပါတယ်လျှင်အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုတိုးပွါးရသောဇီဝအခြေစိုက်မျိုးဆက်ပွားမဟာဗျူဟာရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုဒီလေ့လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကွဲပြားခြားနားအတူတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ကြောင်းအကြံပြုချက်သည်။ အကဲဖြတ်တွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုအခြေခံလိမ့်မည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားအစကတည်းကထံမှလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ရန်လြှငျ, နောက်ဆုံးမှာ, လိင်စိတ်နိုးထအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုနှင့်ရိုးရှင်းစွာနှိုးဆွအကဲဖြတ်၌ဤကနဦးခြားနားချက်ကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ နောက်တစ်နေ့အပိုင်းလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများကနေလေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ထင်ဟပ်လှုံ့ဆော်မှု၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်မည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုန့်ပြန်နေတဲ့အာရုံကြောပါဝင်ပတ်သက်မှု၏လေ့လာမှုများ။ ဒီလေ့လာမှုတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် copulatory အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်ထိုကဲ့သို့သော hypothalamus နှင့် amygdala ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသသော်လည်း, သူတို့သည်လူ့သင်တန်းသားများကိုပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးလို့မရနိုင်ပါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုမိုရှုပ်ထွေးသိမြင်တုံ့ပြန်မှုဖြေရှင်းရန်လုံးဝနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ လူ့လိင်စိတ်နိုးထနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏မော်ဒယ်များနှင့်ဦးစားပေး (လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖုံးကွယ်ရှိနေစဉ်Pfaus, Kippin, & Genaro, 2003), သူတို့ကဒီပြန်လည်သုံးသပ်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ လူသားမြားသညျတှငျ, မကြာသေးမီ neuroimaging နည်းစနစ်ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုမည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါပြီ။ ပေနှင့် fMRI နှစ်ဦးစလုံးအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအခြသွေးစီးဆင်းမှုမြားတှငျပွောငျးလဲအသုံးပြုနည်းစနစ် imaging နေကြသည်။ ပေကရေဒီယိုသတ္တိကြွ tracers များစုစည်းနေခြင်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်, ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့် fMRI မတူဘဲအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့် activation နှင့် Deactivate detect နိုင်ပါတယ်။ fMRI နှင့်အတူ, ကသာလှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲကို၏ညှနျကွားပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါပေမယ့်မမူကြောင်းလူသိများသည်။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းစနစ်ဒီဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံအတိအကျယန္တရားများမသိရသေးသော်လည်းဦးနှောက်အားဖြင့်အသှေးကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုတိုးချဲ့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောယူဆချက်အပေါ်သို့မှီခိုနေရသည်။
imaging လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည် thalamus, amygdala, ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, Orbital prefrontal cortex, medial အပါအဝင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုန့်ပြန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်အများအပြားအလားတူဦးနှောက်ဒေသများအတွက်တိုးမြှင့် activation ပြကြောင်းပြသ prefrontal cortex, cingulate cortex, insula, Corpus callossum, ယုတ်ညံ့ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, fusiform gyrus, occipitotemporal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, striatum, caudate နှင့် globus pallidus ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏တူညီသော set ကိုတုန့်ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့အထူးရှာဖွေနေမကြာမီကလေ့လာမှုများ, ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တုံ့ပြန်အတွက်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့, anterior cingulate အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် medial prefrontal cortex ထပ်အများအပြားဒေသများပြကြောင်း Orbital prefrontal cortex တွေ့ရှိခဲ့ , insula, amygdala, thalamus, နှင့် ventral striatum (Karama et al ။ , 2002; Ponseti et al ။ , 2006) ။ သို့သျောလညျးကိုသာယောက်ျားတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း hypothalamus အတွက် activation နှင့် arousal သားတို့သညျရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းယင်း၏ activation ပြသခဲ့သည်။ ဒီလိင်ခြားနားချက်ဘို့တဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်ဟာ hypothalamus ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ထူအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ရန်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအောက်ပါယောက်ျားများ၌တွေ့မြင်တိုးလာ Steroid တစ်မျိုးလျှို့ဝှက်ချက် (ထဲမှာရရှိလာတဲ့သည် hypothalamic gonadal ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်Stoleru, Ennaji, Cournot, & Spira, 1993) ။ ကလေ့လာမှု Hamann, Herman, Nolan နှင့်ဝေါ်လဲန် (2004), fMRI နှင့်နေဆဲဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြု. လိင်ကွဲလှုပ်ရှားမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန် hypothalamic activation အတွက်အလားတူလိင်ခြားနားချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားကိုလည်းယောက်ျားမိန်းမတို့ဓာတ်ပုံများမှ arousal ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့မပြုခဲ့သော်လည်းအဆိုပါ amygdale အတွင်းအမျိုးသမီးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပိုမိုမြင့်မားယေဘုယျ activation ပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာအာရုံကြောကို Activation အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်မွေးရာပါ morphological သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မလိင်ကွဲပြားမှုကြောင့်ရိုးရိုးကွဲပြားခြားနားမှုတုံ့ပြန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာတိုးမြှင့ hypothalamic activation ယောက်ျားစိုက်ထူရယူနိုင်ပြီးဒီ hypothalamic လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့် amygdala အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလိင်ကွဲပြားမှုသာအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့တုန့်ပြန်မဟုတျဘဲအော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ (သို့သော်ဤကိစ္စတွင်သည်ဟုမထင်ကြဘူးHolstege & Georgiadis, 2004) ။ တကယ်တော့, အော်ဂဇင်နှင့်အတူ amygdala Deactivate နဲ့အော်ဂဇင်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်, လည်းမရှိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်, အော်ဂဇင် precedes ကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်းလိင်မတူညီအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အလိုဆန္ဒထက်ဇီဝကမ္မ arousal အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိပုံရသည်။
လိင်စိတ်နိုးထအခြေခံအထွေထွေအာရုံကြောကွန်ရက်များယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်တူညီသော်လည်းဤ circuits များ differential တင်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်အခြေခံပြီး activated နိုင်ပါသည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဘယ်သို့အမျိုးအစားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (လိင်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်နှိုးဆွဖြစ်ရှိသတင်းပို့ကြသည်Janssen et al ။ , 2003; ကယ်လီ & Musialowski, 1986; Schmidt က, 1975) ။ မကြာသေးမှီကအလုပ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ content အပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုများတွင်သရုပ်ဆောင်များ၏လိင်အပျေါမှာမူတည်ပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားအာရုံကြောကို Activation အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (ရှိပါတယ်Rupp, Herman, Hamann, & Wallen, 2004) ။ အဆိုပါ fMRI ကင်နာအတွက်နေစဉ်, ဘာသာရပ်များဆဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းအတွက်တင်ပြအထီးဝတ်လစ်စလစ်, အမျိုးသမီးကိုယ်လုံးတီးတစ်ဦးကြားနေခွအေနအေ, ဒါမှမဟုတ် fixation, သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှုမြင်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation ဟာကြားနေခွအေနအေစဉ်အတွင်း activation နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ တူညီတဲ့လိင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုပိုမိုတက်ကြွစွာယုတ်ညံ့ယာယီနှင့် occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်ယောက်ျားတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများတူညီသောလိင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မှတိုးမြှင့် activation မဆိုဒေသများမပြခဲ့ပါဘူး။ လူတို့သညျ amygdala, hippocampus, Basal ganglia, နှင့် prefrontal cortex အချို့ဒေသများအပါအဝင်, အမျိုးသမီးများထက်လိင်စိတ်နိုးထဖို့ related ဦးနှောက်ဧရိယာများပိုမို differential ကို activation ပြသခဲ့သည်။ အမြိုးသမီးမြားအမြိုးသမီးမြားစိတ်ခံစားမှုယောက်ျားလုပျသောထုံးစံ၌ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များနှင့်အတူတူပင်လိင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားခွဲခြားမှုမအကြံပြုခြင်းဤကွဲပြားခြားနားမှုမပြခဲ့ပါဘူး။ အမျိုးသမီးများသာအမြင်အာရုံ cortical ဒေသများရှိဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတူတူလိင်မှတိုးချဲ့ဖွင့်သုံးပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုအထူးသအမျိုးသမီးတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ဘယ်လောက်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုများသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဤအ cortical ဒေသများရှိအမျိုးသမီးများ၏တိုး activation (ကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ကောင်း nonsexual နှင့်ပိုပြီးဆက်စပ်အချက်များပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပိုမိုရှုပ်ထွေးချဉ်းကပ်ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါRupp & Wallen, 2007).
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအာရုံကိုပစ်မှတ်အတားအဆီးလေ့လာရေးအာရုံကြော activation အတွက်လေ့လာကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်ရန်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြသည့်အခါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့မဟာဗျူဟာအတွက်ကွဲပြားသောဖြစ်နိုင်ခြေဖြေရှင်းရန်။ မကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှု (Ponseti et al ။ , 2006) လှုံ့ဆော်မှုများအရံ Contextual ဒြပ်စင်ကိုမရရှိနိုင်, ယောက်ျားမိန်းမတို့အခါ, မသက်ဆိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို၏, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အာရုံကြော activation ၏တူညီပုံစံများကိုပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၌, လိင်၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူ့မှုသည်ကြည့်ရှုအားပေးဓာတ်ပုံတွေအခြားမည်သည့်အရံခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အခြေအနေတွင်မရှိဘဲလိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်း။ အဆိုပါစာရေးဆရာယောက်ျားမိန်းမတို့မရရှိနိုင်အခြေအနေတွင်မရှိဘဲပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန် (လိုက်ဖက် valence နှင့် arousal ၏ IAPS ထိန်းချုပ်မှုဓါတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏အာရုံခံတုန့်ပြန်ခြုံငုံကွာခြားမသရုပ်ပြပါ။ အဘယ်အရာကိုကွာခြားခဲ့ပါဘူး, သို့သော်, အထူး ventral striatum နှင့် centromedian thalamus, ဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများရှိတိုးလာ activation ထုတ်လုပ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစားကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးလိင်၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, ဆုလာဘ်စနစ်၏ activation အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်စိတ်နိုးထအခြေခံသည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအတွက်, ဒါပေမယ့်ကိုသာစနစ်များကိုသက်ဝင်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာအတွက်ကွဲပြားကြဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်တူညီသောနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ EEG တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်ထောက်ခံပါတယ်, မိန်းမများယောက်ျား (သို့ပွုထက်တူညီတဲ့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားလျော့နည်းခွဲခြားကြောင်းအကြံပြုCostell, Lunde, Kopell, & Wittner, 1972) ။ Costell et al ။ ယင်းကဆက်ပြောပါတယ်အနုတ်လက္ခဏာအပြောင်းအလဲ (CNV) လှိုင်း၏လွှဲခွင်တိုင်းတာ။ အဆိုပါ EEG ဒီ component တစ်ခုသတိပေးနှင့်ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အကြားဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုများ၏အဆင့်ဆင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။ ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုအထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဝတ်လစ်စလစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကြားနေ nonsexual ဓာတ်ပုံကိုဖြစ်စေ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသတိပေးနှိုးဆွအောက်ပါ 500 စက္ကပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု 10 msec preview ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုထက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ CNV ပိုမိုလွှဲခွင်ပြသခဲ့သည်။ သာအမျိုးသမီးများ, သို့သော်, ကြားနေနှိုင်းယှဉ်အတူတူလိင်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တစ်ခုတိုးပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအမူအကျင့်အဆင့်မှာလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအဆင့်မှာ, ယောက်ျားဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်အတူတူပင်လိင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးခွဲခြားသော။ အကြံပြု
ကျနော်တို့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် arousal အစပျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဘယ်သို့အမျိုးအစားများအတွက်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ hypothesize ။ အထူးသ, ထိုကဲ့သို့သောထိုသရုပ်ဆောင်များကို၏လိင်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းခွအေနမြေားသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ, ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်လိင်စိတ်နိုးထစားစရာအတွက် variable ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, အထက်အကြံပြုအဖြစ်, ယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းလိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုဇာတ်စင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုထုတ်လုပ်မတူကွဲပြား၏အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါစာပေအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်အထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လိင်မတူညီတုံ့ပြန်မှုများ၏ဇစ်မြစ်ကိုမသိရှိပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအချက်များပေါင်းစပ်, လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, ဇီဝကမ္မ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ variable တွေကိုဖွယ်ရှိလိင်စိတ်နိုးထ၏အစီရင်ခံစာများတွင်လေ့လာလိင်ကွဲပြားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ တချို့ကသုတေသီများ (လိင်သဘာအကြီးအကျယ်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင်းငြင်းခုန်Reiss, 1986) ။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုယောက်ျားကပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားများ၏ Display ကိုပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်အကျပ်ကိုင်အမျိုးသမီးများ, ယနေ့ပင်အချို့ဒီဂရီမှတည်ရှိမယ့်နှစ်ဆစံ (အားပေးတော်မူပြီခရော & Popp, 2003; Murnen & Stockton, 1997) ။ 12-22 နှစ်ပေါင်းအသက်ဇာတ်ကောင် featuring လူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ၏ content တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားလုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစတင်ဘယ်မှာမြင်ကွင်းများတွင်ပိုမိုလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိကြ၏တွေ့ရှိခဲ့Aubrey, 2004) ။ 1990 ထံမှ 2000 မှလိင်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုလူကြိုက်များရုပ်မြင်သံကြား, ဒါပေမယ့်လည်းရုပ်ရှင်အမျိုးသမီးလိုက်လျောညီထွေနေနှင့်သတိထား (အားပေးအားမြှောက်မယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံဖော်ကျူးဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်မသာHartley & Drew, 2001) ။ သူတို့ဘဝတလျှောက်လုံးယောက်ျားမိန်းမတို့အားဖြင့်ကြုံတွေ့လူမှုသွန်သင်ချက်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဒါကလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများတွင်လေ့လာကွဲပြားခြားနားမှု (အထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုReiss, 1986; Widmer, Treas, & Newcomb, 1998) ။ ဒါ့အပြင်ဘာသာရေးအတူဘုရားကျောင်းတက်ရောက်သူနှင့်မှတ်ပုံတင် (လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုကျဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Haerich, 1992; Jensen, Newell, & Holman, 1990) ။ ဘာသာရေးသွန်သင်ချက်များကိုအမျိုးသမီးလိင် stigmatize လျှင်ဤမိန်းမတို့သည် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်အဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့သတင်းပေးပို့တုံ့ပြန်မှုနေကြပါတယ်လိမ့်မည်။ ယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေထက်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်လူမှုရေး interaction ကဗီဒီယိုတိပ်ခွေကနေပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပေမယ့်လက်တွေ့ lab ထဲမှာ, ဤလိင်ခြားနားချက် (အမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုထိတွေ့မှု, coeducational အတွေ့အကြုံ, နည်းပုလ်လိင်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လျော့ချခဲ့သည်Koukounas & Letch, 2001) ။ အတူတူ, ယခင်စာပေအတွေ့အကြုံကိုအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကွဲပြားခြားနားမှု, ကျားမအခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကို arousal ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အမျိုးသမီးတွေလူ့အဖွဲ့အစည်းမျှော်လင့်ချက်များကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုမှာပို Self-သတိခံစားရပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်, သူတို့အမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမြင့်မားဖော်ပြရန်မထားတဲ့လူမှုရေးကျားမအခန်းကဏ္ဍကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သုံးအခြေအနေများအောက်တွင်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမေးခွန်းအုပ်ချုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Self-အစီရင်ခံအတွက်ဘက်လိုက်မှုကိုဆန်းစစ်နှင့် A လေ့လာမှုလျော့နည်းလုံခြုံအမည်ဝှက် (ရှိခဲ့သည့်အခါအမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများထက်ပိုပြီး, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ underreported တွေ့ရှိခဲ့အလက်ဇန်းဒါး & Fisher, 2003) ။ အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါအလားတူကျားမအခန်းကဏ္ဍတုံ့ပြန်အရတော့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ မကြာခဏအောက်မှာ-အစီရင်ခံစာဟာသူတို့ရဲ့ရိပ်မိလူ့အဖွဲ့အစည်းမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်မိမိတို့၏ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, ယောက်ျား (စသူတို့၏ရိပ်မိကျားမအခန်းကဏ္ဍကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက Over-သတင်းပို့စေခြင်းငှါသူအမျိုးသမီးများ, မတူဘဲFisher သည် 2007) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုယောက်ျား hypermasculinity ၏မြင့်မားသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်သူတို့အထီးစမ်းသပ်ခဲ့လျှင်ထက်အမည်မသိစစ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ambivalent sexism ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိခဲ့ စစ်တမ်းများ၏မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာအမျိုးသမီးတွေမကြာသေးမီကပိုပြီးလိင်အလိုလိုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားထက်ဖြစ်ပြခဲ့ဟုကြေညာချက်တွင်ပါရှိသောတဲ့အခါဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုသာ, သို့သော်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးလိင်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလည်းမရှိသည့်အခါအစဉ်အလာပုလ်စံနမူနာတွေနဲ့ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုအထီးမိမိတို့၏အစီရင်ခံပြောင်းလဲပစ်ကြောင်း, သူတို့ဒါတစ်ခုသာအမျိုးသမီးစမ်းသပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်တိကျမှန်ကန်အပေါ်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်သဘောထားများ၏ရှုပ်ထွေးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြကြဘူးသောတွေ့ရှိချက်များ အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အစီရင်ခံစာများ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုအတူတကွလူမှုဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူတို့အစီရင်ခံစာများတွင်ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသော differential ကိုနှင့် Polarized သက်ရောက်မှုကိုအလေးပေး။
တုံ့ပြန်၏ဤတားစီးသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများကိုတိုင်းတာလေ့လာမှုများအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်အင်္ဂါ arousal သို့မဟုတ်အာရုံကြော activation ၏လေ့လာမှုများအဘို့မသာ, သိသာဖုံးကွယ်ရှိနိုငျတယျ။ ဤစာတမ်းရဲ့သီအိုရီမော်ဒယ်အဆိုအရအမျိုးသမီးပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်၏တားစီးဘယျလိုမှမပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံနှင့်အတူအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏အောက်ခြေအဆင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဇီဝကမ္မ arousal အပေါ်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်လျော့လိမ့်မယ်။ တားစီးကိုလည်းယောက်ျားနှင့်အတူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားခြင်းမရှိဘဲခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ပြောတယ်ထားတဲ့အတွက် fMRI လေ့လာမှုအားဖြင့်သရုပ်ပြအာရုံကြော activation ၏အစီအမံ, သြဇာလွှမ်းမိုး။ တားစီးစရာမလိုဘဲလူတို့သညျ amygdala အတွက်ဝိသေသ activation, anterior ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, နှင့် hypothalamus ပြသပေမယ့်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟန့်တားယောက်ျား (မBeauregard, Levesque, & Bourgouin, 2001) ။ အမြိုးသမီးမြားလူသိရှင်ကြားမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့ပိုများပါတယ်လျှင်ထို့ကြောင့်သူတို့၏ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်များတွင်လိင်အင်္ဂါနှင့်အာရုံကြော arousal ၏အောက်ခြေအဆင့်ယောက်ျားထက်အမျိုးသမီး သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ Self-တားစီးရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လူမှုရေးမျှော်မှန်းချက်မှ၎င်းတို့၏ရိပ်မိကျားမ script များနှင့်ကိုက်ညီမှလူမှုရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဘာသာရပ်ရဲ့သဘောထားတွေ၏သက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစာပေအစီရင်ခံသည့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတာကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ လိင်စိတ်နိုးထအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings မကြာခဏ (ဇီဝကမ္မအစီအမံသို့မဟုတ် arousal မကိုက်ညီပါဘူးHeiman, 1977; Laan et al ။ , 1995; Steinman et al ။ , 1981) ။ တဦးတည်းက Moderator, ဤသဘောထားနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏အဆင့်ဆင့်သတင်းပေးပို့အကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်အဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လိင်သဘောထားများနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားကိုပြု၏ထက်ဥပမာအားဖြင့်, ပိုပြီးအပျက်သဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေ (ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထ၏အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကယ်လီ & Musialowski, 1986) ။ အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှု (ဇီဝကမ္မ arousal ခေါ်ဆောင်သွားဇာတ်ကားနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန်တူညီခဲ့ပေမယ့်, အရှက်ကွဲခြင်း, အမျက်ဒေါသ, ဒါမှမဟုတ်အပြစ်ခံစားချက်တွေကိုရူးနှမ်းသောရုပ်ရှင်လိင်စိတ်နိုးထ၏အနိမ့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings လက်ခံရရှိကြောင်းတွေ့ရှိရLaan et al ။ , 1994) ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မ arousal အကြားဒီအဆက်ပြတ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်, အစလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ဖို့ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Chivers et al ။ (2004) အမျိုးသမီးတွေလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်မသက်ဆိုင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု၏ရုပ်ရှင်မှတူညီသောလိင်အင်္ဂါ arousal ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သူတို့၏ဘာသာရပ်အတွက်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သရုပ်ဆောင်များကို၏လိင်ပေါ် မူတည်. လှုံ့ဆော်မှုများအကြားကွဲပြားနှင့်၎င်းတို့၏ Self-ကြေညာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးနှင့်အတူအရတော့ခဲ့လိင်စိတ်နိုးထသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူ incongruence မပြခဲ့ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မ arousal ကြားရှိအမျိုးသမီး incongruence ၏ပြင်းထန်သောဥပမာအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါ arousal ဖော်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးသားကောင်များ၏လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများဖြစ်ကြသည်။
တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အချို့သောကဏ္ဍများ၏အမျိုးသမီးပြုခဲ့ပေါ်သော်လည်းမအခြားသူတွေအပေါ်လူမှုဆက်ဆံရေး၏သက်ရောက်မှု, အမျိုးသမီးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ရှုပ်ထွေးမီးမောင်းထိုးပြ။ လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ပြောင်းလဲ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု differentially နိုင်သည့်မျိုးစုံသိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ ဝိရောဓိ, အမျိုးသမီး (ယောက်ျားထက်လျော့နည်းတိကျတဲ့အရံလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ကြပေမယ့်Chivers et al, 2004; Chivers & Bailey, 2005), သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံပိုပြီးလူမှုရေးအရသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အရှင်ပိုပြီးကန့်သတ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အမြိုးသမီးမြားကိုသူတို့သေချာပေါက်အဖြစ် Subject လိင်ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ခု non-နှစ်သက်သောလိင်အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ပင် nonhumans (အကြားလိင်ဆက်ဆံမှု၏ပုံဖော်တင်ဆက်အဖြစ်, နှိုးဆွသောသတင်းပို့မဟုတ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးမှလိင်အင်္ဂါ arousal ပြChivers et al ။ , 2004; Chivers & Bailey, 2005) ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့အအတော်လေး nonspecific လိင်အင်္ဂါ arousal ဖွယ်ရှိအမျိုးသမီးလိင်အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ၏အရေးပါမှုကိုထင်ဟပ်။ လိင်အင်္ဂါ arousal အမျိုးသမီးတွေ Subject unarousing တွေ့ရသောလှုံ့ဆော်မှုမှဖြစ်ပေါ် အကယ်. သူတို့အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သော်လည်းထိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အနည်းငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, အရှင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်အင်္ဂါ arousal မှုမများပါတယ်, မလိင်အင်္ဂါ, arousal အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ ဤသည်လိင်အင်္ဂါ arousal မပါဘဲပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal လိင်အင်္ဂါ arousal ယောက်ျားရဲ့လိင်တစ်ဦးအလွန်အရေးပါစည်းမျဉ်းရှုထောင့်အောင်, အရှင်အများဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါမယ်လို့ဘယ်မှာယောက်ျားရဲ့လိင်ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။
အတူတကွဤလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများအကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကွဲပြားမှုလိင်စိတ်နိုးထအမျိုးသမီးရဲ့အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ခံစားချက်များကိုနေကြပါတယ်ကြောင်းလူမှုရေးအချက်များကနေရလဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်သူတို့အမှုကို, ထိုကဲ့သို့သောဘက်လိုက်မှုသူတို့ Subject သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်နှင့်အတူအရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal တွေ့ကြုံခံစားကြဘူးထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ဇီဝကမ္မ arousal ၏အမျိုးသမီးအမြင်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ တနည်းအားရိပ်မိလူမှုရေးမျှော်မှန်းချက်၏ရလဒ်အဖြစ်, အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာသူတို့ကအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစား arousal များ၏အဆင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, သူတို့သတင်းပို့ arousal များ၏အဆင့်ကိုတားစီးနိုငျသညျ။ ဤအယန္တရားများ၏ဘယ်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်သေးလိင်အင်္ဂါ arousal လိင်စိတ်နိုးထအမျိုးသမီးရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်များကိုအဘို့ဖြစ်၏ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်မသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့နဲ့အခြားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ထုတ်လုပ်ဖြစ်စေ, ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အနာဂတ်သုတေသန၏အရေးပါသောဧရိယာလူမှုဆက်ဆံရေးလိင်သဘောထားတွေ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်မည်သို့အလယ်အလတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေးဖိအားအပြင်, ယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားဇီဝကွဲပြားခြားနားမှုဖွယ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြု။ လူမှုရေးအချက်များပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု modulate နိုင်ပေမဲ့, ဇီဝဗေဒအချက်များလူမှုရေးအချက်များပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မ arousal modulate နိုင်သည့်ဖို့အတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ Gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင်လိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းအပေါ်ဇီဝလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်ဖွယ်ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဟော်မုန်းဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ valence ပြောင်းလဲနေဖြင့်ပြုမူလိမ့်မည်။ ယခင်အလုပ် (ယောက်ျားပိုမိုမြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မ arousal ရှိသည်ပြKoukounas & McCabe, 2001) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကပေလေ့လာမှုခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတုန့်ပြန်လက်ျာအလယ်တန်း occipital gyrus နှင့်ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အတွက် activation, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ, အပြုသဘော (ယောက်ျားအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိStoleru et al ။ , 1999) ။ ထို့အပြင် testosterone ဟော်မုန်း၏နာတာရှည်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောသူ hypogonadal ယောက်ျား,, (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျား၏ပုံမှန်အာရုံကြော activation ပုံစံများကိုပြသကြပါဘူးပန်းခြံ et al ။ , 2001) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သာမန်ယောက်ျားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်သို့သော် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏သုံးလအောက်ပါ, hypogonadal ယောက်ျားသည်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, cingulate, insula, Corpus callossum, thalamus, နှင့် globus pallidus အတွက်တိုးမြှင့် activation ပြသပါ။ သာမန်ယောက်ျား (ညီမျှနှုန်းထားများမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသည့်အခါတည်းကကုသမှုမရှိဘူး hypogonadal ယောက်ျားစိုက်ထူရယူနိုင်စွမ်းကြောင့်Kwan, Greenleaf, မန်း, Crapo, & Davidson, 1983) ဤတွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ nonphysiological တုံ့ပြန်မှုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း ဆက်စပ်. အ။ သူတို့က amygdala အတွက် activation အတွက်မဆိုခြားနားချက်ကိုမတှေ့ခဲ့ကွောငျးနည်းစနစ်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သာမကြာသေးမီက fMRI စကင်နာများတိကျစွာဒီနက်ရှိုင်းစွာ embedded ဒေသ scan လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
ယခင်လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Sherwin (1993) အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲများတွင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံစူးစိုက်မှု, testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းသူတို့ရဲ့ endogenous အဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များဖြစ်စေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် nonsexual သဘောသဘာဝတစ်အာရုံသတင်းစကားနေချိန်မှာတဦးတည်းကိုနားထောငျထဲသို့ကစားမယ့်ပစ်မှတ်အာရုံသတင်းစကား, ပြန်လုပ်ပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်, ထိုဘာသာရပ်များ '' ကတခြားစကားကိုနားထောငျထဲသို့သေးငယ်တဲ့နှောင့်နှေးပြီးနောက်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ယင်းအာရုံကကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအခါထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခါအားလုံးအမျိုးသမီးတွေပစ်မှတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုထပ်ပိုမိုအမှားအယွင်းများစေတော်မူ၏။ အဆိုပါ 12 ခုနှစ်တွင်နိမ့်ဆုံး testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေတိုးလာပေမယ့်ခြုံငုံနမူနာထဲမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအမှားများကိုဟော်မုန်းအရေးယူများအတွက်တံခါးခုံလည်းမရှိကြောင်းအကြံပြု, testosterone ဟော်မုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်မဟုတ်။ ရလဒ်အနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲသော်လည်းယင်းဖြစ်စဉ်အတွက်အလွန်နိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်သာအမျိုးသမီးတွေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသောကြောင့်, သူတို့က testosterone ဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုလုပ်ပါ။ ဒါဟာအယူအဆ (ပုံမှန်မိန်းမတို့အား exogenous testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲနေသည်Tuiten et al ။ , 2000) ။ အစီရင်ခံ testosterone ဟော်မုန်း၏တစ်ခုတည်းထိုးလက်ခံရရှိအမျိုးသမီးများ, အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလေးနာရီ, ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ "တပ်မက်သောစိတ်" နှင့်ရိပ်မိ arousal တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကပုံတူကူးယူရန်လိုအပ်ပါသည်နေစဉ်, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသိမြင်အမြင်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခု Active အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုပါဘူး။
testosterone metabolites, အထူးသဖြင့်အီစထိုဂျင်ကိုလည်းယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အမြင်သြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အခြေခံအဆင့်တွင်, (ရှေ့တော်၌ receptors hormonesဆူဇူကီး et al ။ , 2001) တဦးတည်းဥပမာအားဖြင့်, ပြောင်ပြောင်တောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည်ဘက်လိုက်မှုအာရုံကို၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှုမြင်အမှန်တကယ်ဘယ်လောက် may ။ ၏အမြင်နှင့်အာရုံ, ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်ဟော်မုန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်သွယ်ဝိုက်, ဟော်မုန်းကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်Rupp & Wallen, 2007; ဝေါ်လဲန်, 1990, 2001) ။ အမျိုးသမီးအတော်များများလေ့လာမှုများသံသရာကျော်သာအတက်အကျသော ovulatory ကာလအတွင်းတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်တွေ့ပါ (Harvey, 1987; Tarin & Gomez-Piquer, 2002; ဝေါ်လဲန်, 2001) ။ သို့သော်ထိုအရာသီစက်ဝန်းသက်ရောက်မှု (မကြာခဏသိမ်မွေ့များမှာTarin & Gomez-Piquer, 2002) နှင့်အချို့သောလေ့လာမှုတွေ (မျိုးဥထွက်အပြင်ဘက် arousal အတွက်သံသရာသို့မဟုတ်တိုးဖြတ်ပြီး arousal ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အဆင့်ဆင့်အတွက်မဆိုအပြောင်းအလဲမပြဘူးSchreiner-Engel, Schiavi, Smith, & White, 1981) ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်အမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွားအပေါ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဆိုပါ incongruent တွေ့ရှိချက်အတိုင်းအတာများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးဘုံအတိုင်းအတာများပြဿနာအများအပြားလေ့လာမှုများလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားညွှန်ကိန်းအဖြစ်တိုင်းတာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ယူနစ်အသုံးပြုသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္မေးခွန်းမကြာခဏဘာသာရပ်ဘက်လိုက်မှုနှင့်တားစီး (ထံမှခံရသောကြောင့်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်းတာခြင်းများအသုံးပြုမှုတိကျစွာဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုဖော်ကျူးမပြုစေခြင်းငှါအလက်ဇန်းဒါး & Fisher, 2003) နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် Proceptivity အပေါ်ပိုမိုသိမ်မွေ့ရာသီစက်ဝန်းသက်ရောက်မှုများသို့အသာပုတ်ပါ (Travin & Gomez-Piquer, 2002) ။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ပါတီပွဲများသို့ထွက်ရန်နှင့်မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအမျိုးသားများနှင့်တွေ့ဆုံလိုသောဆန္ဒပြင်းပြကြောင်းတင်ပြသည် (Haselton & Gangestad, 2006) နှင့်ပိုပြီး Self-ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်ဆင်သောတန်ဆာကိုသရုပ်ပြ (Haselton, Mortezaie, Pillsworth, Bleske-Rechek, & Frederick, 2006) ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်ရာသီလာခြင်းသံသရာ၏သက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်ဒုတိယအဖြစ်များသည့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာပြissueနာမှာဘာသာရပ်များအတွင်းဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုမှရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဟော်မုန်းအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့စဉ် (Slob, Bax, Hop, Rowland, & van der Werff ten Bosch, 1983) တွင်အမျိုးသမီးများ။ ဒီလေ့လာမှုမှာပထမစမ်းသပ်မှုမှာဟော်မုန်းအခြေအနေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုပြေလည်အောင်လုပ်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့၏ရာသီလာခြင်းသံသရာ၏အခြားအဆင့်များ၌စမ်းသပ်ပြီးသည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ luteal အဆင့်တွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးများသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအဆင့်နိမ့်ကျသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဟော်မုန်းများသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆက်ဆံလိုသောအဆင့်မြင့်လာသောအခါသူတို့နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်မှုတိုးမြှင့်စေခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအားသွေးအေးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုစိတ် ၀ င်စားမှုများကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသောယခင်အလုပ်သည်ရာသီလာခြင်းသံသရာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤဟော်မုန်းအခြေအနေကိုခံစားခဲ့ရသည်။
ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် arousal အပေါ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုအပြင်, အထီးဆွဲဆောင်မှု၏အမျိုးသမီးအမြင်ဟာသူတို့ရဲ့သားအိမ်သံသရာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘယ်အရာကိုအမျိုးသမီးယောက်ျား '' မျက်နှာ၏ပုလ်စပ်လျဉ်းဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါ (ရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီး fluctuatesGangestad & Simpson, 2000) ။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (အခြားအဆင့်စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိမဟုတ်ကြောင်းသံသရာ၏သူတို့ရဲ့ ovulatory အဆင့်စဉ်အတွင်းပုလ်အထီးစရိုက်များများအတွက်ဦးစားပေးပြသFeinberg et al ။ , 2006; Gangestad, Simpson, ဝမ်းကွဲ, Garver-Apgar, & Christensen, 2004; Penton-Voak & Perrett, 2000) ။ အဆိုပါ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တော့, အမျိုးသမီး (ဣတ္အထီးပုလ်မျက်နှာများထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရင်ဆိုင်နေရရှာတွေ့ဂျုံးစ် et al ။ , 2005) ။ ဦးစားပေးများတွင်အတက်အကျကို (ရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးမျိုးဆက်ပွားဦးစားပေးများတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါGangestad & Simpson, 2000) ။ ပိုပြီးပုလ် features တွေနှင့်အတူယောက်ျားပိုမိုမြင့်မားကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတူမျိုးဗီဇများကိုနိုင်ပေမဲ့, ပုလ်အထီး (အမျိုးအနွယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လျော့နည်းများပါတယ်Waynforth, Delwadia, & Camm, 2005) နှင့် Partners ဆက်ဆံရေးရိုက်ထည့်ပါ (ဗန် Anders & Watson, 2006) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖွယ်ရှိအခါမျိုးဥထွက်မှာ, အမျိုးသမီးများမထိုက်မတန်ဗီဇလေးလည်းဦးစားပေးစခွေငျးငှါနှင့်ပိုပြီးယောက်ျား masculine ဖို့ဆွဲဆောင်ကြလိမ့်မည်။ ဟော်မုန်းအလားအလာကိုယ်ဝန်အဘို့ပြင်ဆင်နေကြသည်အခါ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, ဦးစားပေးပိုပြီးမိဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အရင်းအမြစ်များပေးနိုငျသူတစ်တည်ငြိမ်ဖက်ကိုရှာတွေ့မှပုလ်ယောက်ျားနှင့်အတူအဖော်ရှာကနေ shift လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုအနိမ့်အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှု၏အန္တရာယ်များနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့မျိုးဗီဇအရည်အသွေးသည်သို့မဟုတ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ရောဂါ၏အလားအလာဆုလာဘ်ဟန်ချက်ညီတဲ့ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတက်အကျအိမ်ထောင်ဖက်ဦးစားပေးဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါဟော်မုန်းပြည်နယ်များအထီးစရိုက်များဘို့အမျိုးသမီး '' ဦးစားပေး modulate ဘယ်လိုလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာဗဟိုသိမြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်သည်နှင့်တစ်ဦးချင်း၏ဟော်မုန်းပြည်နယ်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်အကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက်သိသိအတက်အကျအခြေအနေတွင်သတ်မှတ်ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးဟော်မုန်းပမာဏအတွက်အတက်အကျနှင့်အတူအလုံးစုံလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဦးစားပေးများတွင်အပြောင်းအလဲများသံသရာတစ်လျှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအယူအဆအမျိုးသမီးတွေအတွက်အာရုံကြော activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရာသီအဆင့်ပေါ် မူတည်. အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှာရှာဖွေနေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းမကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှု (ကထောက်ခံနေသည်Gizewski et al ။ , 2006) ။ ရာသီအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့နှစ်လယ်ပိုင်း luteal စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအထူးသအမျိုးသမီးများသည် anterior cingulate, လက်ဝဲ insula နှင့်လက်ဝဲ orbitofrontal cortex ပိုမို activation ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတှကျအထောကျအထားမြားကိုလညျး (ERP လှုပ်ရှားမှုဟာရာသီစက်ဝန်း၏အဆင့်နှင့်အတူပြောင်းလဲဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအမျိုးသမီးများ၏ ERP လေ့လာမှုများမှလာKrug, Plihal, Fehm, & Born, 2000) ။ က Eleven အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ရာသီ, ovulatory နှင့် luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းနေဆဲဝတ်လစ်စလစ်ယောက်ျား၏ဓာတ်ပုံများ, လူများကြားနေဓါတ်ပုံများနှင့်ကလေးငယ်ရှုမြင်ကြသည်။ သာအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်အခါ ovulatory အဆင့်စဉ်အတွင်း, အမျိုးသမီးများကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအစိတ်အပိုင်း (LPC) တွင်တစ်ခုတိုးလာကိုပြသခဲ့ပါ။ အဆိုပါ LPC valance နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏အဆင့်ဆင့်မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ထင်နေသည်။ အဆိုပါ LPC အတွက်တိုင်းတာအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပါ, အမြိုးသမီး ovulatory ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပြုသဘော valence သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. စာပေလေ့လာတွေ့ရှိသောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအမျိုးသမီး sensitivity ကိုအတွက်သိသိမူကွဲထံမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ periovulatory အဆင့်တိုးအမျိုးသမီးများကို '' အာရုံကိုနှင့်သူ၏ gonadal ဟော်မုန်းပမာဏအမျိုးသမီးများ၏များထက်သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးကျော်သာအတက်အကျအမျိုးသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာသူတို့အားအလားတူအဆင့်ဆင့်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုသဘောဆောင်အမြင်စဉ်အတွင်းအီစရိုဂျင်၏ဖြစ်နိုင်သည်မြင့်မား။
သက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဤအချိန်တွင်ကန့်သတ်နေကြသော်လည်းထိုသို့ဘာသာရပ်များ၏ဟော်မုန်းပြည်နယ်ဖွယ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့သိမြင်တုန့်ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးပါသော variable ကိုကြောင်းသိသာသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (ပါးစပ် contraceptives ယူပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြHamann et al ။ , 2004), သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့ရာသီသံသရာ၌ကျင်လည်ဘယ်မှာပင်အကဲဖြတ်ရန်ဘူး (Chivers & Bailey, 2005; Hamann et al ။ , 2004; Koukounas & McCabe, 2001; Ponseti et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားဒီဇိုင်းပြဿနာများသိသာအရေးပါမှုဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ယုတ်လျော့ခဲ့ကြပြီးရလာဒ်အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ပါပြီ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုတိကျစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အမြင်နှင့်မည်သို့ဒီယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ကွဲပြားမှုမှပြောပြတယ်အပေါ်ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဒေတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသူတို့လိင်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့် arousal တွေ့ရသောလှုံ့ဆော်မှုများအမြိုးမြိုးအတွက်ကွဲပြားသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ဇီဝကမ္မ arousal နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဘုံမက်ထရစ်သေးမရှိအဖြစ်ကျနော်တို့နေဆဲ preference ကိုနှင့်ဇီဝကမ္မ arousal အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ဤလိင်ကွဲပြားမှုများအကြားဆက်ဆံရေးမသိရပါဘူး။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်များအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအလယ်အလတ်တုံ့ပြန်မှု၏တစ်ဦးကအမျိုးမျိုး။ သက်သေအထောက်အထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အချို့ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ content တစ် differential ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါထောက်ခံပါတယ်။ Contextual အချက်များ, ဖြစ်နိုင်သည်လူမှုရေးဇာတ်လမ်း၏ဖန်တီးမှုအဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, အမျိုးသမီးများပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်စဉ်လူတို့သညျလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ပုံဖော်မင်းသား၏လိင်ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ယောက်ျားကိုလည်းအပြုသဘောလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်နွယ်သောအနာဂတ်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်အမျိုးသမီးများ, အနာဂတ်ခွင့်ပြုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အဓိကအားနှိုးဆော်ခြင်းနေစဉ်ထို့အပြင်ယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့် (ထိုမြင်ကွင်းသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့များ၏သရုပ်ဆောင်နှင့်စီမံကိန်း၏ objectification ခွင့်ပြုလှုံ့ဆော်မှုပိုနှစ်သက်Koukounas & ကျော်, 2001) ။ ထိုအဦးစားပေးသင်ယူသို့မဟုတ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ အားဖြင့်အလုပ်မလုပ် Chivers နှင့်ဘေလီ (2005) ဖြစ်နိုင်သည်အကာအကွယ်ယန္တရားအဖြစ်, အမျိုးသမီးများပြီးတော့သူတို့ရဲ့ arousal ပုံစံများယောက်ျားအတွက်လျော့နည်းတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အနာဂတ်အလုပ် differential ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်သောလက္ခဏာများများ၏အရေအတွက်မှအကျိုးလိမ့်မယ်။ ထိုကွဲပြားမှုကိုနားလည်ခြင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်အလားတူစမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုသုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနမှလက်တွေ့ကျတဲ့အရေးပါမှုသည်။
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုဖြစ်နိုင်သည်သည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏အမြင်နှင့်အကဲကိုညွှန်ကြားကြောင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်လူမှုရေးနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ၏ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားအပြုသဘောနှင့် arousal အဖြစ်ကဤလှုံ့ဆော်မှုမှတ်ပုံကိုအခြေခံပြီးဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသာကွဲပြားမှုရှိဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု, ရိပ်မိကျားမအခန်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ဖွယ်ရှိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါဝင်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သိမြင်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီအယူအဆအဘို့ခိုင်ခံ့ထောက်ခံမှုအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မအစီအမံမကြာခဏ uncorrelated ဖြစ်ကြောင်းဘုံတွေ့ရှိချက်ထဲမှာထငျရှားပါသညျ။
လိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုရှုထောင့်များထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးသင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက်ကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုမသာ, ထိုလိင်စိတ်နိုးထလုပ်ငန်းစဉ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌အလွန်အရေးပါသည်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပလိင်စိတ်နိုးထနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လက်ရှိကုထုံးအဓိကအားထိုကဲ့သို့သောစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်မိန်းမကိုယ်ချောဆီအရည်ကြည်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအဖြစ်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းအမှာစကားပြောကြား။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီ pharmacological သိပ္ပံနည်းကျတိုးနေသော်လည်း, အရှိဆုံးသင့်လျော်သောကုသမှုသိမြင်မှုကုထုံးကြောင်းငြင်းခုန်။ အမြိုးသမီးမြား, အထူးသဖြင့်, ပိုကောင်းတဲ့ထိရောက်မှုဖြစ်ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်နိုးထ၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုပစ်မှတ်ထားကုထုံးထက်ဆေးဝါးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းလိုက်ရှာဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ကွဲပြားခြားနားသော Contextual ဒြပ်စင် s ကိုပုံများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဦးစားပေးများတွင်ကွဲပြားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှထူးခြားသောမည်မဟုတ်ပါ။ အစား, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ဦးနှောက်လိင်မတူညီအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပုံစံများထုတ်လုပ်သူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကဲဖြတ်အတွက် function ကွဲပြားသောအယူအဆထောက်ပံ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလက်ဇန်းဒါး MG, Fisher က TD ။ အမှန်တရားနှင့်အကျိုးဆက်များ: Self-အစီရင်ခံလိင်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဆနျးစစျဖို့အတုအယောင်ပိုက်လိုင်းအသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2003; 40: 27-35 ။ [PubMed]
အလက်ဇန်းဒါး GM က, Sherwin BB ။ ပါးစပ် contraceptives သုံးပြီးအမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိင် steroids, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရွေးချယ်ရေးအာရုံစူးစိုက်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 1993; 18: 91-102 ။ [PubMed]
Aubrey JS ။ လိင်နှင့်ပြစ်ဒဏ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုးဆကျ၏စာမေးပွဲများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ။ 2004; 50: 505-514 ။
Bancroft ဂျေစိတ်ဓာတ်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Lennart L ကို, အယ်ဒီတာ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရောဂါ (Vol3။ ။ ): အဆိုပါတန်ဖိုးရှိရှိနှင့်မျိုးပွားမှု age- အထီး / အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်ဆံရေး။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1978 ။ စစ။ 154-163 ။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ၏ Basson R. တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2002; 28: 1-10 ။ [PubMed]
Beauregard M က, Levesque J ကို, Bourgouin P. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုမသိ Self-စည်းမျဉ်း၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 1-6 ။ [PubMed]
Chivers ML, Bailey JM ။ လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ထုတ်ယူကြောင်းအင်္ဂါရပ်များအတွက်တစ်ဦးကလိင်ခြားနားချက်။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2005; 70: 115-120 ။ [PubMed]
Chivers ML, Reiger, G, Latty အီး, Bailey JM ။ လိင်စိတ်နိုးထများ၏တိကျသောအတွက်တစ်ဦးကလိင်ခြားနားချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2004; 15: 736-744 ။ [PubMed]
ကော်စတာက M, Braun ကို C, ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများတုံ့ပြန် Birbaumer N. ကျားကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်ဦးက magnetoencephalographic လေ့လာမှု။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2003; 63: 129-147 ။ [PubMed]
Costell RM, Lunde ၎င်းကို, Kopell BS, Wittner wk ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု preference ကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်အဖြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်အနုတ်လက္ခဏာမူကွဲ။ သိပ္ပံ။ 1972; 177: 718-720 ။ [PubMed]
ခရော M က, Popp ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ: သုတေသနဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုနှင့်အတိုင်းအတာများဝေဖန်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2003; 40: 13-26 ။ [PubMed]
Feinberg DR, ဂျုံးစ်ဘီစီ, et al ဥပဒေ Smith က MJ, Moore က FR, DeBruine LM, Cornwell RE ။ ရာသီစက်ဝန်း, ရိုအီစရိုဂျင်အဆင့်နဲ့လူ့အသံပုလ်ဦးစားပေး။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2006; 49: 215-222 ။ [PubMed]
Fisher က TD ။ ငယ်ရွယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အစီရင်ခံစာများအပေါ်စမ်းသပ်နှင့်လူမှုရေးစံသက်ရောက်မှု၏လိင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2007; 36: 89-100 ။ [PubMed]
Gangestad SW, Simpson ဂျေအေ။ လူ့မိတ်လိုက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: ကုန်သွယ်ရေး-off နှင့်မဟာဗျူဟာဗဟုဝါဒ။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 2000; 23: 573-644 ။ [PubMed]
Gangestad SW, Simpson ဂျာဝမ်းကွဲ AJ, Garver-Apgar အီး, Christensen PN ။ အထီးအမူအကျင့်ပြသမှုများအတွက်အမျိုးသမီးဦးစားပေးရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးပြောင်းပေးပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2004; 15: 203-207 ။ [PubMed]
တစ်ဦးက fMRI လေ့လာမှု: Gizewski ER, Krause အီး, Karama S က, Baars တစ်ဦးက, Senf W က, Forsting အမ်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းကွဲပြားရာသီအဆင့်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏အကြားဦးနှောက်ကို Activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ 2006; 174: 101-108 ။ [PubMed]
Haerich P. အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုနှင့်ဘာသာရေးတိမ်းညွတ်: တစ်ဦးကပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဘာသာတရား၏သိပ္ပံလေ့လာဘို့ဂျာနယ်။ 1992; 31: 361-365 ။
လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံများအကြားခန်းမ KS, Binik Y ကို, Di Tomasso အီး Concordance ။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး။ 1985; 23: 297-303 ။ [PubMed]
Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန် K. ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 7: 1-6 ။ [PubMed]
လိင် ed ဇာတ်ကားတွေအတွက် Hartley H ကို, Drew T. ကျားမမက်ဆေ့ခ်ျများ: အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် Trends နှင့်ဂယက်ရိုက်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ကုထုံး။ 2001; 24: 133-146 ။
Harvey သည် SM ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ရာသီစက်ဝန်းကာလအတွင်းအတက်အကျ။ Psychosomatic သုတေသနဂျာနယ်။ 1987; 31: 101-110 ။ [PubMed]
Haselton MG, Gangestad SW ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့အလိုဆန္ဒများနှင့် ovulatory သံသရာတစ်လျှောက်စောင့်ကြပ်ယောက်ျားရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏ conditional စကားရပ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2006; 49: 509-518 ။ [PubMed]
Haselton MG, Mortezaie M က, Pillsworth ဥပမာ Bleske-Rechek တစ်ဦး, ဖရက်ဒရစ် DA ။ လူ့အမျိုးသမီးအဆင်တန်ဆာအတွက် Ovulatory ဆိုင်း: မျိုးဥထွက်ခါနီး, အမျိုးသမီးများအထင်ကြီးဖို့ဝတ်စားဆင်ယင်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 51: 40-45 ။ [PubMed]
Heiman JR ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများတစ်ဦးက psychophysiological တူးဖော်ရေး။ Psychophysiology ။ 1977; 14: 266-274 ။ [PubMed]
Heiman JR ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပုံစံများ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1980; 37: 1311-1316 ။ [PubMed]
Holstege, G, Georgiadis JR ။ အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အခြေခံအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 46: 132 ။
Janssen အီး, လက်သမား, D, ဂရေဟမ် CA. လိင်သုတေသနအတွက်ဇာတ်ကားတွေကိုရွေးချယ်ခြင်း: ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ဦးစားပေးများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2003; 32: 243-251 ။ [PubMed]
Janssen အီး, Everaerd W က, Spiering M က, Janssen ဂျေအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်။ လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်ဆီသို့။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2000; 37: 8-23 ။
Jensen က L, Newell RJ, Holman တီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်သူနှင့်လက်မထပ်ရသေးလုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားအလိုလိုယုံကြည်ချက်။ ဘာသာတရား၏သိပ္ပံလေ့လာဘို့ဂျာနယ်။ 1990; 29: 113-117 ။
ဂျုံးစ်ဘီစီ, Little က AC အ, Boothroyd L ကို, DeBruine LM, Feinberg DR, ဥပဒေစမစ် MJ, et al ။ ချို့ယွင်းသောအဆင့်မြင့်မားသည်လာသောအခါမျက်နှာများအတွက်ဣတ္နှင့်သိသာနျြးမာရေးအတှကျဆက်ဆံရေးနှင့်ဦးစားပေးလုပ်ဖို့ကတိကဝတ်ရာသီစက်ဝန်း၏ရက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2005; 48: 283-290 ။ [PubMed]
Karama S က, et al Roche Lecours တစ်ဦးက, Leroux J ကို, Bourgouin P ကို, Beaudoin, G, Joubert က S ။ ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ဦးနှောက်ကို Activation ဒေသများတွင်။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2002; 16: 1-13 ။ [PubMed]
လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများ, လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ: ကယ်လီ K ကို Musialowski ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1986; 15: 487-498 ။ [PubMed]
Kinsey AC အ, Pomeroy သည့် WB, မာတင်အီး, Gebhard PH သည်။ လူ့အမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia တွင်: WB Saunders; 1953 ။
Korff J ကို, Geer JH ။ လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်အကြားဆက်ဆံရေး။ Psychophysiology ။ 1983; 20: 121-127 ။ [PubMed]
Koukounas အီး, Letch မိုင်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်၏အမြင်များဆက်နွယ်နေပါသည်။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2001; 141: 443-456 ။ [PubMed]
Koukounas အီး, McCabe အမတ်။ erotica မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလွှမ်းမိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှု variable တွေကိုမြား: A psychophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2001; 30: 393-408 ။ [PubMed]
Koukounas အီး, အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ကျော် R. လေ့: အာရုံကိုအာရုံသက်ရောက်မှု။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2001; 58: 49-64 ။ [PubMed]
Krug R ကို, Plihal W က, Fehm HL, မျိုးဆက်ပွားအရေးပါမှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုများ၏အမြင်အပေါ်ရာသီစက်ဝန်း၏မှေးဖှားဂျေရွေးချယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ်ခုကအဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အလားအလာလေ့လာမှု။ Psychophysiology ။ 2000; 37: 111-122 ။ [PubMed]
kwan M က, Greenleaf WJ, မန်း J ကို, Crapo L ကို, Davidson JM ။ အထီးလိင်အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်၏သဘောသဘာဝ: hypogonadal ယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ဓာတ်ခွဲခန်း-Self-အစီရင်ခံစာလေ့လာမှု။ လက်တွေ့ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ်။ 1983; 57: 557-562 ။ [PubMed]
Laan အီးဆလိုက်များနှင့်ရုပ်ရှင်မှအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Everaerd ဒဗလျူလေ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1995; 24: 517-541 ။ [PubMed]
Laan အီး, Everaerd W က, ဗန် Bellen, G, Hanewald G. အမြိုးသမီးမြားရဲ့ male- မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုထုတ်လုပ် erotica ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1994; 23: 153-169 ။ [PubMed]
Laan အီး, Everaerd W က, ဗန် der Velde J ကို, Geer JH ။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံစိတ်ပိုင်းဖြတ်: လိင်အင်္ဂါ arousal နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းအရာကနေတုံ့ပြန်ချက်။ Psychophysiology ။ 1995; 32: 444-451 ။ [PubMed]
Lykins တစ်ဦးက, Meana M က, differential ကို၏ Kambe G. အထောက်လှမ်းမျက်စိ-ခြေရာခံခြင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှပုံစံများကိုကြည့်ရှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2006; 35: 569-575 ။ [PubMed]
Lykins အေဒီ, Meana M က, Strauss က CP ။ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှအမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ 2007 စာမူထုတ်ပြန်ဖို့တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ [PubMed]
ပိုက်ဆံ J ကို, Ehrhardt AA ကို။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေး: ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကနေရင့်ကျက်ဖို့ကျားမဝိသေသလက္ခဏာများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် dimorphism ။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း; 1972 ။
Murnen SK ကို, ချတအမ်ကျားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် Self-အစီရင်ခံ arousal: Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ။ 1997; 37: 135-153 ။
O'Donohue WT, Geer JH ။ လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1985; 14: 233-246 ။ [PubMed]
နန်းတော် EM, Gorzalka BB ။ လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်အမျိုးသမီး arousal ၏ differential ပုံစံများ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ဇီဝနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစိတ်အပိုင်းများကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1992; 21: 135-159 ။ [PubMed]
ပန်းခြံ K သည်, Seo JJ, Kang ဟောင်ကောင်, Ryu SB ကင်မ် HJ, Jeong GW ။ penile စိုက်ထူ၏နှောက်စင်တာများအကဲဖြတ်ဘို့ (BOLD) အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI မှီခိုသောအသွေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ျခြိုသုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2001; 13: 73-81 ။ [PubMed]
Penton-Voak, Perrett ပစ IS ။ အထီးအဘို့အမျိုးသမီး preference ကိုသိသိအပြောင်းအလဲများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ လူ့အပြုအမူ၏ဆင့်ကဲ။ 2000; 21: 39-48 ။
Peterson ZD, Janssen အီး Ambivalent ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ဇီဝကမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် Co-ဖြစ်ပေါ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများ၏သက်ရောက်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ (စာနယ်ဇင်းများတွင်) [PubMed]
Pfaus JG, Kippin TE, Genaro C. တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ကဘာလဲ။ လိင်သုတေသနနှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2003; 14: 1-63 ။ [PubMed]
Ponseti J ကို, Bosinski HA, Wolff က S, Peller M က, Jansen အို Mehdorn HM, et al ။ လူသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ endophenotype ။ NeuroImage ။ 2006; 33: 825-833 ။ [PubMed]
Redoute J ကို, Stoleru ကို S, Gregoire M က, ကုန်ကျစရိတ် N ကို, Cincotti L ကို, Lavennes က F, et al ။ လူ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2000; 11: 162-177 ။ [PubMed]
Reiss ll ။ လိင်သို့တစ်ဦးကလူမှုခရီး။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1986; 48: 233-242 ။
Rupp H ကို, Herman R ကို, Hamann က S, fMRI သုံးပြီးတူညီတဲ့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လှုံ့ဆော်မှုမှဝေါ်လဲန် K. လိင်ကွဲပြားမှု။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 46: 101 ။
Rupp HA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအတွက်ဝေါ်လဲန် K. လိင်ကွဲပြားမှု: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်တစ်ခုကမျက်စိ-ခြေရာခံလေ့လာမှု။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 51: 524-533 ။ [PubMed]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့စဉ်နှင့်အပြီးလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အပြုအမူများတွင် Schmidt က G. အယောက်ျားလေး-အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1975; 4: 353-365 ။ [PubMed]
Schmidt က, G, Sigusch V ကို, ခေါ်ဆောင်သွားပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းမှ Schafer အက်စ်တုံ့ပြန်ချက်: အမျိုးသား-အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1973; 2: 181-199 ။ [PubMed]
Schreiner-အိန်ဂျယ် P ကို, Schiavi RC, Smith က H ကို, အဖြူရောင်ဃလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ရာသီစက်ဝန်း။ Psychosomatic Medicine ။ 1981; 43: 199-214 ။ [PubMed]
Slob AK, Bax CM,-Hop WCJ, Rowland DL, ဗန် der Werff တစ်ဆယ် Bosch ရဲ့ JJ ။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ရာသီစက်ဝန်း။ Psychoneuroendocrinology ။ 1996; 21: 545-558 ။ [PubMed]
Steinman DL, Wincze JP, Sakheim, Barlow DH, Mavissakalian အမ်လိင်စိတ်နိုးထ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပုံစံများတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1981; 10: 529-547 ။ [PubMed]
Stoleru စင်ကာပူဒေါ်လာ, Ennaji တစ်ဦးက, Cournot တစ်ဦးက, Spira အေ LH pulsatile လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထလွှမ်းမိုးမှုနေကြသည်။ Psychoneuroendocrinology ။ 1993; 18: 205-218 ။ [PubMed]
Stoleru ကို S, Gregoire M က, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး, Cinotti L ကို, et al ။ လူ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1999; 28: 1-21 ။ [PubMed]
ဆူဇူကီး T က, Kinoshita Y ကို, Tachibana က M, Matsushima Y ကို, Kobayashi Y ကို, Adachi W က, et al ။ လူ့မျက်ကြည်လွှာအတွက်လိင် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း receptors ၏ expression ။ လက်ရှိမျက်လုံးသုတေသန။ 2001; 21: 28-33 ။ [PubMed]
Symons ဃလူ့လိင်၏ဆင့်ကဲ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1979 ။
Tarin JJ, ဂိုမက်ဇ-Piquer V. Do အမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးက hidden အပူကာလရှိသည်? လူ့မျိုးပွား။ 2002; 17: 2243-2248 ။ [PubMed]
Tuiten တစ်ဦးက, ဗန်အသံဆူဆူညံညံ J ကို, Koppeschaar H ကို, Bernaards ကို C, Thijssen J ကို, အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေး Verbaten R. အချိန်သင်တန်းဆိုးကျိုးများ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2000; 57: 149-153 ။ [PubMed]
ဗန် Anders သည် SM, Watson ဟာ NV ။ Cross-Section နှင့် longitudinal ဒေတာ: မြောက်အမေရိကလိင်ကွဲနှင့် Non-လိင်ကွဲယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက် relationship status ကိုနှင့် testosterone ဟော်မုန်း။ Psychoneuroendocrinology ။ 2006; 31: 715-723 ။ [PubMed]
ဝေါ်လဲန် K. Desire နှင့်စွမ်းရည်: ဟော်မုန်းနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1990; 14: 405-420 ။ [PubMed]
ဝေါ်လဲန် K. လိင်နှင့်အခြေအနေတွင်: ဟော်မုန်းနှင့်မျောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 40: 339-357 ။ [PubMed]
Waynforth: D, Delwadia S က, Camm အမ်ပုလ်မျက်နှာဗိသုကာများအတွက် preference ကိုအပေါ်အမျိုးသမီးမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လူ့အပြုအမူ။ 2005; 26: 409-416 ။
Widmer ED, သိရပါသည် J ကို, Newcomb R. သဘောထားများကို 24 နိုင်ငံများတွင် nonmarital လိင်ဆီသို့ဦးတည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 1998; 35: 349-358 ။
Wincze JP, Hoon P ကို, Hoon EF ။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ: စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာအားဖြင့်သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 1977; 6: 121-133 ။ [PubMed]